Fa maninona ny Files PST an'ny Outlook no mora voan'ny kolikoly?
Home > Products > DataNumen Outlook Repair > Fa maninona ny Files PST an'ny Outlook no mora voan'ny kolikoly?
Outlook no most mpanjifa mailaka be mpampiasa amin'ny tontolon'ny Windows. Na izany aza, ny rakitra tahiry Outlook PST koa dia mora voan'ny kolikoly. Nahoana? Ireto ambany ireto dia hodinihinay ny antony sy ny vahaolana mifanaraka amin'izany.
1. Tsy manome fomba mahomby hisorohana ny kolikoly fisie PST i Microsoft
Ny voalohany sy most zava-dehibe dia tsy manome fomba mahomby hisorohana ny kolikoly i Microsoft, toy izao:
Ny endrika fisie PST mihitsy dia tsy manana endrika fanoherana ny kolikoly, toy ny firaketana fanarenana toy ny ao amin'ny WinRAR .RAR endrika arisiva na pejy torrent toy ny amin'ny SQL Server Tahiry .MDF. Miaraka amin'ny firaketana fanarenana na pejy falehan-driaka, raha simba ny ampahany amin'ny angona dia mora ny mamerina azy ireo ary mampihena 90% ny fahafahan'ny fatiantoka data.
Mora simbaina ny fisie PST rehefa mitombo ny haben'ny fisie, ary tsy misy ny mekanisma hisorohana izany ho azy. Tsy hampiasa rakitra maromaro i Outlook hitahiry ho azy ny data raha be ny haben'ny rakitra. Mila manao azy amin'ny tanana ny mpampiasa. Ary mazava ho azy, most amin'ireo mpampiasa dia tsy hahatsikaritra izany. Ny fisehoana tokana mifandraika ao amin'ny Outlook dia manosika ny mpampiasa hanangona ireo mailaka taloha, saingy ity endri-javatra ity dia tsy miraharaha ny haben'ny rakitra.
Ao amin'ny Outlook, tsy misy endri-backup backup ho an'ny fisie PST. Raha nanana fiasa toa izany i Outlook dia raha simba ny rakitra PST, na dia tsy azo averina aza izany dia afaka mamerina amin'ny kinova famerenam-bidy voalohany ianao, izay misy most ny tahirin-kevitra vaovao raha toa ka atao isan-kerinandro ny backup.
Microsoft dia manome fitaovana fanarenana rakitra PST maimaim-poana antsoina hoe scanpst, miaraka amin'i Outlook. Na izany aza, tsy afaka manamboatra rakitra PST amin'ny kolikoly kely fotsiny izy io. Raha mafy ny fahasimbana na ny kolikoly, dia tsy hahomby ny scanpst ho an'ny most ny tranga.
2. Betsaka ny olona manararaotra ny fisie PST:
Malaza tokoa i Outlook ka be dia be ny olona mampiasa azy isan'andro. Ary maro no manararaotra ny fisie PST izay mahatonga azy io hirona amin'ny kolikoly:
Amin'izao fotoana izao noho ny fitomboan'ny mailaka sy ny angona manokana, ny haben'ny rakitra PST dia mitombo be. Manomboka amin'ny GB maromaro tamin'ny andro voalohany, hatramin'ny 20GB na 50GB mihitsy aza. Ny lehibe kokoa dia ny rakitra PST, vao mainka mora simbaina. Fomba fanao tsara hifehezana angona lehibe ny fizarana azy ireo ho fisie PST kely kokoa, ohatra, ny tahirin'ny mailaka taloha amin'ny rakitra PST voatahiry, hahazoana antoka fa ny habe PST tsirairay dia habe <= 10GB, fa tsy mampiasa rakitra PST tena lehibe.
Hakaton'ny olona iray ny solosaina raha mbola nosokafan'ny Outlook ny rakitra PST, izay hiteraka kolikoly ihany koa.
Misy olona hitahiry rakitra PST be dia be ao anaty tamba-jotra, izay tsy atolotra anao satria ny rakitra PST dia tsy natao ho an'ity. Ary mora ny miteraka kolikoly rehefa miditra amin'ny fisie PST amin'ny alàlan'ny tamba-jotra.
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny fomba fanao tsara hisorohana ny kolikoly ataon'ny PST dia hita ao amin'ny https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Ahoana ny fanamboarana ireo rakitra PST simba:
Raha misy ny kolikoly ao amin'ny PST dia afaka manandrana maimaim-poana ianao aloha scanpst, satria io no fitaovana ofisialy nomen'ny Microsoft hanamboarana ireo rakitra PST simba, ary maimaim-poana izany. Raha tsy mandeha izy dia azonao atao ny manandrana DataNumen Outlook Repair.